काठमाडौं । सरकारी चिकित्सकहररु पुनः आनदोलित भएका छन् । गत फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गोदानको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि संघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो तर माग पूरा नभएपछि संघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहत माक्र राख्न माग गर्दै शुक्रबारबाट आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका छन् । हावा हुरी प्रभावित बारा र पर्सा जिल्लामा भने सरकारी चिकित्सकले नियमित सेवा दिने गोदानले जनाएको छ । देशभर नै सरकारी चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका काम बन्द गरेका छन् ।
सरकारले सरकारी चिकित्सकहरूलाई निजामती कर्मचारी जस्तै तीन तहको सरकारमा समायोजन गर्न खोजेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । गोदानले चिकित्सकहरूलाई संघीय सरकारको मातहत हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यो माग पूरा नहुँदासम्म चिकित्सा सेवा बहिष्कार गर्ने संघले बुधबार निर्णय गरेको हो ।
मुलुकभर करिब १४ सय सरकारी चिकित्सक छन्  । सरकारी चिकित्सकहरूले आ–आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बताएका छन् । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले गोदानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्घता जनाएको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप १ जनामा संक्रमण
काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका एक जना पुरुषको परीक्षण रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै १ जना ४८ महिला र २८ वर्षीया अर्का १ जना पुरुष गरी २ जनामा...
चीनबाट फर्केका विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरस भएको पुष्टि
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका एक नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएपछि सो भाइरसको आशंका गरिएको ती युवाको...
क्यान्सर अस्पतालको विकासमा चीनले सहयोग गर्ने
चितवन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग निरन्तर रहने बताएकी छिन् । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा आज चिनियाँ मेडिकल...
आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशभर मनाइँदै
सुनको भाउ प्रतितोला रु. ७७ हजार नाघ्यो
कोरोना भाइरसका कारण सुन इतिहासकै महँगो
खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको भ्रमण
नेपाल कोरोनाबाट प्रभावित छैन : पर्यटनमन्त्री भट्टराई
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ३२९ कैदीको बाँकी कैद मिनाहा
संसद बैठकमा महरा थुनामुक्त भएको जानकारी
काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका एक जना पुरुषको...
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका एक नेपालीमा कोरोना भाइरसको...
चितवन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले नेपालको स्वास्थ्य...
नेप्से सूचक १४०० विन्दुमा, कारोवार २ अर्वमाथि
काठमाडौं । आज मंगलबार पनि शेयर बजारमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको...
पुँजी बजारमा फेरि हरियाली सुरु
काठमाडौं । पुँजी बजारमा फेरि चमक आउन थालेको छ । केही दिन सुस्त बनेको बजार...
घट्यो शेयर बजार दोहोरो अङ्कले
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो...
ग्लोबल आईएमि बैंकको शेयर कारोबार खुल्न सकेन
काठमाडौँ । स्वाप रेसियो निर्धारण् भएपश्चात हिजो माघ १ गते धितोपत्र...
एनएमबीको लाभांश आजदेखि सेयरधनीको खातामा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट एनएमबी बैंकले वितरण गर्ने भनी...
सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर घट्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्स...